Real Estate Listings: » Business Directory » Design Services » IN » Chandigarh » Best CCNA ukuqeqeshwa Institute ukuqeqeshwa in chandigarh1
Abakwa-CNT Technologies bahlinzeka ngokuqeqeshwa okuhle kweCCNA nge-chandigarh .CCNA RINGING AND SWITCHING COURSE akugcini nje ngokusilungiselela ubuchwepheshe besisekelo kodwa futhi kusiqinisekisa ukuthi samukelwe ngobuchwepheshe besisekelo obulandelayo. I-CCNA yakha ukuzethemba kwabafundi ukuthi bangakusebenzisa kanjani, ukuphatha nokuxazulula izinkinga kumanethiwekhi. Lokhu kwenzelwe ukukulungiselela umsebenzi wezinga lokungena futhi ulungele izinselelo zobuchwepheshe besizukulwane esilandelayo. Ngemuva kwalesi sifundo uzoba nolwazi olusebenzayo lokuhambisa nokushintshela, Ikheli le-IP, Iphrothokholi Yesicelo Senethiwekhi. I-CCNA ayinazo izimfuno zokugcina phambili iChipna iyinkambo eyisisekelo futhi edingekayo emkhakheni wenethiwekhi kubandakanya imininingwane ye-router kanye nokushintshwa kokushintshwa kokucabanga ngokomqondo nangokwenziwayo .CNT isiza abafundi ukwenza ukuhlolwa kwesitifiketi se-cisco.
IChandigarh (amagama aphinyiselwa endaweni: [tʃə̃ˈɖiːɡəɽʱ] (lalela)) yidolobha, isifunda kanye nensimu yobumbano eNdiya esebenza njengenhloko-dolobha yezifundazwe ezimbili ezingomakhelwane zePunjab neHaryana. Idolobha leli lihlukile njengoba lingeyona ingxenye yalezi zifundazwe zombili kodwa liphethwe ngqo nguHulumeni Wenhlangano, ophatha zonke izindawo ezinje ezweni. IChandigarh ihlangana nomngcele wesifundazwe sasePunjab enyakatho, entshonalanga naseningizimu, nangesifundazwe saseHaryana empumalanga. Kubhekwa njengengxenye yesifunda-dolobha saseChandigarh noma iGreater Chandigarh, okubandakanya iChandigarh, nedolobha lasePanchkula (eHaryana) kanye namadolobha aseKharar, Kurali, Mohali, Zirakpur (ePunjab). Itholakala kumakhilomitha angama-260 (amamayela ayi-162) enyakatho yeNew Delhi nama-229 km (143 miles) eningizimu-mpumalanga ye-Amritsar. Kwakungenye yamadolobha okuqala okwakuhlelelwe ukwenziwa emuva kwenkululeko e-India futhi yaziwa umhlaba wonke ngobunjiniyela bayo nokwakha amadolobha. Uhlelo olukhulu lomuzi walungiswa umakhi wezakhiwo waseSwitzerland-French uLe Corbusier, oguqukile ezinhlelweni zangaphambili ezenziwe ngumakhi wezakhiwo zasePoland uMaciej Nowicki kanye nohlelo lwaseMelika u-Albert Mayer. Iningi lezakhiwo zikahulumeni nezindlu kuleli dolobha zaklanywa yiChandigarh Capital Project Team eholwa nguLe Corbusier, Jane Drew noMaxwell Fry. Ngo-2015, i-athikili eyakhishwa yi-BBC egama linguChandigarh njengenye yamadolobha ambalwa ahlelwe kahle emhlabeni ukuthi iphumelele ngokuhlanganisa ukwakhiwa kwezakhiwo ezinkulu, ukukhula kwamasiko nokwenziwa kwesimanjemanje.I-Capitol Complex kaChandigarh ngoJulayi 2016 yamenyezelwa yi-UNESCO njengeGugu Lomhlaba engqungqutheleni yama-40 yeNgqungquthela Yamagugu Womhlaba ebanjelwe e-Istanbul. Umbhalo we-UNESCO wawungaphansi kwe- "The Architectural Work of Le Corbusier umnikelo ovelele ku-Modern Movment". Izakhiwo zeCapitol Complex zifaka phakathi iNkantolo eNkulu yasePunjab neHaryana, iPunjab kanye neHaryana Secretariat kanye nePunjab kanye neHaryana Assembly kanye nezigodlo ezivulekile zesandla, iMartyrs Memorial, iGeometric Hill kanye neMbhoshongo weShadow kanye neR Rock Garden. Idolobha lingenye yezinzuzo eziphakeme kakhulu zedola ezweni. Leli dolobha kubikwa ukuthi lingelinye elihlanzekile kakhulu eNdiya ngenxa yocwaningo lukahulumeni kazwelonke. Insimu yezinyunyana ihola futhi uhlu lwamazwe ase-India nezindawo zawo ngokwe-Human Development Index. Ngo-2015, ukuhlolwa okwenziwe ngabakwa-LG Electronics, bakubeka njengedolobha elijabulisa kakhulu eNdiya ngaphezulu kwenkomba yenjabulo. Indawo yedolobha elikhulu laseChandigarh-Mohali-Panchkula ngokubumbana yakha idolobha-i-Tri, elinabantu abangaphezu kuka-1,611,770.